I-Acer Swift 7, ilaptop encinci entle ngexabiso elingenantlonelo [Uqwalaselo] | Iindaba zeGajethi
Sibuya kwiActualidad Gadget ukuhlalutya enye yeemveliso ezihlala zikhona kubomi bethu bemihla ngemihla, yeyiphi engcono kunaleyo? TSinezandla zethu yenye yezona laptops zincinci kwaye zisebenza kakuhle kwintengiso, Nangona kunjalo, nayo ivelise impikiswano enzima ejikeleze ixabiso layo kunye nezixhobo.
Hlala nathi ukuze sazi zonke iimpawu zelaptop eziphakamisa umxholo wokusebenziseka kunye nokuphatheka kwelona binzana liphezulu.
Ukuba sele ibambe ingqalelo yakho Siyakumema ukuba udlule apha LONTO Apho uya kuba nakho ukuyifumana ngexabiso elifanelekileyo, ubuncinci ngesiqinisekiso sokuba imveliso yezi mpawu ifanelwe, ukuba uzimisele ukuhlawula into efunwa yinkampani ye-Acer, kunjalo.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Iziphumo zokwenyani zokwenyani
2 I-Hardware: Sinelinye lekalika kunye nenye yesanti
3 Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla: I-trackpad, ikhibhodi kunye nokunxibelelana
4 Ukuboniswa kunye namava emultimedia
Uyilo kunye nezixhobo: Iziphumo zokwenyani zokwenyani
Yintoni ezakutsala umdla wethu malunga nale laptop ngokuqinisekileyo inenye yeepaneli ezisetyenziswe kakuhle kwicandelo lazo, umlinganiso phakathi komzimba kunye Isikrini sayo singama-92%, imiphetho iphantse yancinci kwaye ayiqhelekanga kakhulu. Ezinye iinkampani zifuna ukuzifihla ngomphetho omnyama kunye neglasi ngaphakathi kwepaneli, kodwa bambalwa abafumana iziphumo ezinikezelwa yile Acer Swift 7 ukusuka ngo-2019. Oku kuye kwahlaziywa ngokumalunga neyangaphambili kwinkqubo yehinge ephumelele kakhulu, okoko ngaphambili yayiqhele ukwaphuka, kunye nokuziphatha kakubi.
Ubungakanani: I-317.9 x 191.5 x 9,95 mm
Ubunzima: 890 gram
Sinobunzima obunqabileyo Iigram ezingama-890, ukuphatheka kuqinisekisiwe ukuba sibala ukuba ngawaphi amanyathelo 317.9 x 191.5 x 9,95 millimeters ubukhulu. Kulunge kakhulu kwaye oku kuyancomeka xa uyichola. Nangona kunjalo, ukuphoxeka kokuqala esikunika kona kukuchukumisa, sifumanisa ukuba yenziwe ngokudityaniswa kwealuminium, titanium kunye nemagnesium ngokwenkampani, kwaye oku akubonakali kuphumelela kakhulu kwilaptop enexabiso lesiseko elingaphezulu kwe-1.500 euros. Kukudana kokuqala endikuthatheyo kuhlalutyo lwesi sixhobo.
Izixhobo: I-Corning i-Gorilla Glass i-6
Imibala: Mhlophe-Isilivere kunye noMnyama
Nangona kunjalo, inezinto ezithile ezingakumangalisiyo, umzekelo kukuba sinekhamera ebuyisekayo ebekwe ngaphezulu kwekhibhodi. Elinye icala elibonakalayo sisixhobo somnwe somnwe Iminwe ebekwe kwicala lasekhohlo elisebenza njengeqhosha amandla Kwaye kufuneka ndivume ukuba ndiyifumene nge-intuition emsulwa emva kokujonga ilaptop enobuso beemeko. Ubungakanani obukhulu bencwadana yamanqaku yi-9,95 millimeters kwaye oku kuyibeka njengenye yezona zinto zincinci kwiimarike, yinkcukacha esingenakuyihoya.
I-Hardware: Sinelinye lekalika kunye nenye yesanti
Sifumana uhlelo oluneprosesa Intel Core i7-8500Y ezimbini-ezingundoqo, Kwimeko yethu sivavanye imodeli enayo I-8 GB ye-RAM kunye ne-512 GB Ukugcinwa kwe-SSD, ukuza kuthi ga ngoku kulungile. Andikwazi ukuqonda ukuba kutheni kolu vavanyo sinokugcinwa okuphezulu, kodwa hayi eyona RAM, eshiye incasa emnandi emlonyeni wam ngenxa yezizathu ezibini eziphambili: Isixhobo siza ngomgangatho Windows 10 Ekhaya, uguqulelo olungasebenziyo ukuxhaphaza zonke izixhobo zekhompyutha; Isixhobo sine-8 GB ye I-LPDDR3, endaweni yokusebenzisa imodeli engqiqweni ye-LPDDR4 kwilaptop yezi mpawu. Isiphumo kukungasebenzi kakuhle esinokukufumana kumakhulu ambalwa eedola ngaphantsi.
Inkqubo: Intel Core i7-8500Y ezimbini-ezingundoqo
Ikhadi igrafu: Umdibaniso we-UHF Graphics 615
Ukugcina: I-256/512 GB PCIe SSD
Memoria I-RAM: 8GB / 16GB LPDDR3
Kwinqanaba lomzobo sinekhadi lemizobo elihlanganisiweyo Oko kusenza ukuba sicinge ukuba siza kufumana ntoni, ukusetyenziswa kweofisi, ukusebenzisa umxholo kunye nokucela enye into. Imfuno ayisiyonto yakhe kwaye kubonakala ngathi akabambeki kakuhle kwimidlalo enje ngeeCities Skylines. Ngokuqinisekileyo ukusebenziseka kwale laptop kunomdla ngakumbi kunokomelela ngamandla.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla: I-trackpad, ikhibhodi kunye nokunxibelelana
Ingxaki yokuqala iphindaphindekile kolu hlobo lwemveliso, ukusuka kumzuzu wokuqala imvakalelo ebukrakra iqala kwaye kukuba awukwazi ukuvula ilaptop ngesandla esinye, ihenjisi ayilungiswanga kakuhle kwaye kuya kufuneka uyibambe ukuze ingaphakamisi ngokupheleleyo, oku kum sisiphako esibi kwaye akunakuvulwa ngesandla esinye. Ngokubhekiselele kwi-trackpad, sifumana inkqubo ekhawulezayo, esebenzayo ye-panoramic esebenza ngokumangalisayo kakuhle, Ukusetyenziswa kolu hlobo lwehardware kube yimpumelelo enkulu.
Ukuxhuma: 2x i-USB-C, i-WiFi 802.11 ac, iBluetooth 4.2, i-3,5mm Jack.
Enye into efanelekileyo kukuba sinayo ikhamera ebuyekayo ephuma kwaye ifihliwe ngokucinezela nje okujongeka njengeqhosha kodwa kungenjalo. Sinefayile ye- ikhibhodi ngokhenketho olulungileyo, olubuyiselwe emva kunye noloneleyo, ngaphandle kwempumelelo okanye isimanga. Ngokunxibelelana sinezibuko ezimbini ze-USB-C Thunderbolt, uqhagamshelo lweBluetooth kunye ne-ac ye-standard ye-ac. Ngokubhekisele kwibhetri, ifemi inikezela ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 ekude kakhulu ukuba siphumelele kuzo malunga neeyure ezisi-7 ngaphandle kokufuna ngenkani kakhulu, ngaphantsi kweeyure ezi-4 zidlala.
Siqala ngescreen se I-14, i-HD epheleleyo, yitekhnoloji ye-IPS kunye nomthamo wokuchukumisa, Le yinto andinakuyiqonda kakuhle kwiilaptops kuba ikulungele ukuyisebenzisa ngeminwe yakho, njengoko kungonwabisi ukucoca umkhondo wescreen apho uza kuthi wenze khona kwaye ufunde ulwazi. Lo mboniso unokukhanya kwe I-300 nits ebonakala ngathi iphantsi kodwa iyazikhusela ngaphezulu kokwaneleyo ngaphakathi nangaphandle.
Kwinqanaba lesandi, sinezithethi ezibini zestereo ezibekwe ezantsi kwilaptop ezisinika isandi esicacileyo, inamandla kwaye inokwanela ukusebenzisa umculo usebenzisa iinkonzo ezinje ngeSpotify kunye neemovie kwiNetflix. Kule nqanaba inyani kukuba umlinganiso olungileyo wesikrini wokuba le laptop isishiye namava amnandi kakhulu.
I-Acer Swift 7, ilaptop encinci entle encinci ngexabiso elingenantlonelo
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla
Sijonge ngokuqinisekileyo ilaptop ebonakala ngathi iyabiza ngeenxa zonke nge- € 1.550 sithathela ingqalelo izibonelelo ezinkulu ezinjengezo sizibona kwiAmazon (ikhonkco)Nangona kunjalo, ndifumene iinkcukacha kuyo ezingahambelani namava omsebenzisi wokuba ilaptop ethe ngqo kweli xabiso kufuneka ibonelele, kuyandibiza ukuba ndiyincome ngaphambi kokhuphiswano ngamaxabiso afikelelekayo anje ngeMacBook 12 ″, iMacBook Yenza umoya i-LG Gram kunye nezinye iindlela ze-ASUS.
Uyilo olucekeceke kakhulu kwaye lulula
Ukuzimela kakuhle kuqwalasela ukhuphiswano
Ukusetyenziswa ngokulula kunye nezothutho
Olunye usilelo loyilo olungaxolelekiyo
Ixabiso eliphezulu kakhulu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Acer Swift 7, ilaptop encinci entle ngexabiso elingenantlonelo [Hlaziya]
Owona mboniso ubalaseleyo weAmazon Prime Day 2019: NgoMvulo, Julayi 15
Umahluko phakathi kweNintendo switch kunye neNintendo switch Lite